Fantatry ny Mpianatra ny Baiboly, tamin’ny 1879, fa tokony hampahafantarina eran-tany amin’izay ny marina. Nanomboka namoaka an’ilay gazety hoe Ny Tilikambo Fiambenana Manambara ny Fanjakan’i Jehovah àry izy ireo tamin’io taona io. Mbola mamoaka azy io foana izahay hatramin’izao. Mitory any amin’ny tany 239 mahery sy amin’ny fiteny 700 eo ho eo koa izahay. Mbola tsy nisy hoatr’izany mihitsy hatramin’izay!